“Waxaan jeclaan lahaa inaan macallin u noqdo Lionel Messi” – Macallin ku sugan Premier League – Gool FM
“Waxaan jeclaan lahaa inaan macallin u noqdo Lionel Messi” – Macallin ku sugan Premier League
(England) 21 Juun 2020. Lionel Messi ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah xiddigiha ugu wanaagsan taariikhda kubada cagta, waxaana inta uu garoommada ku jiray ka hor yimid xiddigo iyo macallimiin taariikh wanaagsan ku leh ciyaartan.
Macallinka kooxda Everton ee Carlo Ancelotti oo ka mid ah macallimiinta ugu wanaagsan kubadda cagta qarnigan ayaa qiray inuu Messi kamid yahay ciyaaryahannada uu jeclaan lahaa inuu mar uun tababare u noqdo inta uu ku jiro xirfaddiisa.
Inkastoo uu macallinkan iska diiday inuu magacaabo ciyaartoydii ugu wanaagsanayd ee uu horay usoo maamulay isagoo ka cabsanaya inuu xiddig ka tago, misena Ancelotti ayaa ku dhiirraday in Messi uu ku daro xiddigaha uu jeclaan lahaa inuu macallin u noqdo.
“Waxaan jeclaan lahaa inaan macallin u noqdo Lionel Messi, haddii aan kaliya la barbar-dhigayo Cristiano Ronaldo” ayuu yiri macallinkii hore ee Real Madrid.
Kaliya kabtanka Barcelona ma ahan xiddigaha uu jeclaan lahaa Ancelotti inuu tababaro, sidoo kale waxa uu hoosta ka xarriiqay inuu u riyaaqi lahaa haddii uu macallin u noqon lahaa halyeyga AS Roma ee Francesco Totti.